DEG DEG:- Galmudug oo goordhaw soo bandhigtay seddax askari oo ay kusoo qabteen dagaalkii Gaalkacyo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Galmudug oo goordhaw soo bandhigtay seddax askari oo ay kusoo qabteen dagaalkii Gaalkacyo
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in taliska ciidamada booliska ee maamulka Galmudug ay goordhaw halkaasi kusoo bandhigeen seddax nin oo maxaabiis ah, kuwaas oo ay ku sheegeen inay kusoo qabteen dagaalkii saacadihii ugu dambeysay ka dhacaayay galbeedka magaaladaas.
Seddaxdaan nin ayaa waxay saraakiisha ciidanka booliska ee maamulka Galmudug ku sheegeen inay ka mid ahaayeen ciidankii Jubbaland ee ka bar-bar dagaalamayay kuwa Puntland.
Saraakiishaasi ayaa sidoo kale sheegay in mid ka mid ah seddaxdaasi nin uu qabo dhaawac, halka labada kale ay yihiin kuwa xaaladooda wanaagsan tahay.
“Seddaxdaan nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka Jubbaland, waxayna ka bar-bar dagaalamayeen ciidanka Puntland, mid ka mid ah ayaa dhaawac qaba, wuxuuna kusoo dhaawacmay dagaalkii Gaalkacyo, labada kale way caafimaad qabaan” Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah saraakiisha maamulka Galmudug oo saxaafadda kula hadlay goobta seddaxdaasi nin lagu soo bandhigay.
Dhinaca kale, ma jirto warar madax banaan oo xaqiijin kara in seddaxdaasi nin oo ay haatan gacanta ku haayaan taliska ciidamada booliska ee maaamulka Galmudug inay ka tirsan yihiin ciidamada Jubbaland iyo inkale, marka laga reebo sheegashada saraakiisha ciidanka maamulka Galmudug.